Raisul wasaaraha Soomaaliya iyo taliyaha ciidamada AMISOM oo kulan ka yeeshay xaaladda ammaanka dalka
1. (Halkan ka dhgayso) 2. (Halkan ka dhgayso) Raisul wasaaraha Soomaaliya iyo taliyaha ciidamada AMISOM oo kulan ka yeeshay xaaladda ammaanka dalka.
Cabdi Faarax Shirdoon Saacid Raisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xafiiskiisa kula kulmay Taliyaha guud ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM Lt.Jen Andrew Gutti.
Kulnaka labada mas'uul ayaa la sheegay iney kulankooda iskula soo qaadeen xaaladihii ugu dambeeyey ee ammaanka dalka iyo sidii loo xoojin lahaa nabada iyo howlgalada ka dhanka ah Maleeshiyaadka Al-shabaab oo mudooyinkan hakad uu ku yimid.
Jen Andrew Gutti Taliyaha ciidamada AMISOM ayaa kulankaasi ka ballanqaaday in ciidamada AMISOM ay sii wadayaan taageerada ay siinayaan xukuumadda iyo shacabka Soomaaliya ee ku aadan sidii ay dalkooda dib ugu dhisi lahaayeen kadib marka nabad lagu soo dabaalo.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka dalbaday ciidamada AMISOM inay sii xoojiyaan taageerada ku aaddan sidii lagu xasilin lahaa dalka, ayna sii waddo gacanta ay siinayaan ciidamada xoogga dalka iyo dib u dhiska hay'adaha dalka si looga adkaado kooxda Al-Shabaab.
Dhinaca kale kulankan ayaa ku soo aadaya xilli habeen hore madaafiic loo waday xarunta madaxtooyada ay ku habsadeen xaafado ku yaala degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho kuwasoo sababay dhaawaca dad fara badan oo shacab ah.